Faa'iidooyinka Kuuboonada Imtixaanka iyo Qiima dhimista | Martech Zone
Axad, Nofeembar, 29, 2015 Isniin, November 30, 2015 Douglas Karr
Miyaad bixisaa lacag qaali ah si aad u hesho raadad cusub, mise waxaad bixisaa qiimo dhimis si aad u soo jiidato? Shirkadaha qaar ma taaban doonaan kuuboonada iyo qiimo dhimista maxaa yeelay waxay ka baqayaan inay qiimeeyaan magacooda. Shirkadaha kale waxay noqdeen kuwo iyagu iyaga ku tiirsan, si qatar ah u dhimaya faa'iidadooda. Shaki yar ayaa ka jira inay shaqeeyaan ama aysan shaqeynin, in kastoo. 59% ka mid ah suuqleyda dhijitaalka ah ayaa sheegay in qiimo dhimis iyo xirmooyin ay waxtar u leeyihiin helitaanka macaamiil cusub.
In kasta oo qiimo dhimistu ay tahay mid aan caadi ahayn wadista guulaha muddada-gaaban ah, waxay ku burburin karaan qadkaaga hoose, waxayna tababaraan macmiil kasta oo uusan waligiis ku iibsan karin qiimo buuxa. Taasi maaha in la yiraahdo noocyadu waa inaysan qiimo jabin gabi ahaanba - suuqleyda casriga ah ayaa hadda diiradda saaraya geynta qiimo dhimista istiraatiijiyad ahaan iyo ula dhaqmida iyaga sida mashiinnada beddelka hal mar. - Jason Grunberg, Sailthru
Furaha geynta rasiidhada iyo qiimo dhimista ayaa tijaabinaysa. 53% ee suuqleyda dhijitaalka ah waxay sameeyaan A / B ama tijaabooyin kaladuwan oo horumarsan. La soco heerarka beddelka, kanaallada la isticmaalay, soo iibsiga inta jeer, celceliska qiimaha dalabka iyo qiimaha noloshooda ee macaamiisha lagu soo iibsaday rasiidhada iyo qiima dhimista.
Wax walba waan wadaagnay dukaamada tafaariiqleyda waxay u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan kuubannada iyo istaraatiijiyado qiimo dhimis ah oo ku jira muuqaal hore. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood waxay ku soo dhacayaan kala duwanaanta qiimaha, isku-darka, iyo inta jeer ee qiimo-dhimista illaa aad ka heleyso isku-darka saxda ah ee soo jiita oo haya macaamiisha adigoon jabinin bangiga!
Tags: celceliska qiimaha dalabkachannelstabaha kuuboonrasiidhxeelado dhimisdhimista da'da dhijitaalka ahnolosha macaamiisha oo dhanqiimaha noloshasailthruimtixaanka